यति धेरै प्रमाण हुदाहुदै पनि प्रमाण छैनन रे? थुक्क पुलिस प्रसासन! भन्दै एक युवाले राखे यति धेरै जिज्ञासा! – PathivaraOnline
Home > गसिप > यति धेरै प्रमाण हुदाहुदै पनि प्रमाण छैनन रे? थुक्क पुलिस प्रसासन! भन्दै एक युवाले राखे यति धेरै जिज्ञासा!
admin October 6, 2018 गसिप 1
वास्तविक घटना यहि भएको हो बम दिदी बहिनी नै मुख्य योजनाकार हुन ? १ )५ बजे तिर बमको घरमा जादा गेट बाट नै किन भित्र जान दिइनन ? २) निर्माला घर आकि छैन भनेर सोद्दा तेरि छोरी उस्तै छे मैले जिम्मा लेकि छुर ? पोइल गै होलि किन भनी ?त्यो घरमा घटना नभएको भय अबस्य पनि खोज्ने जान्थी ९ गते घरमा बोलाउने ले खोज्न सक्दैन थि र? ३)११ गते छरछिमेक ले खोज्दा साइकल भेटियो भन्ना साथ लास पनि तेतै होला ?कसरि भनी ?
४) न कुनै चाड बाड न कुनै घरको अगाडिको मान्छे छन घरमा एक्कासी पेण्टर (रङ रोगन) किन गरि ? ५) घटनाको छैटौं दिन अम्बाको रुख किन काटियो? ६) जनताको दबाबमा बम दिदिबहिनीसँग सोधपुछ त गर्यो ? उसले खास चलाउने सिम किन मागिएन ? ७) घटनामा भोलि पल्ट फालिएका अम्बा र कन्डम को मेडिकल रिपोर्ट फिङ्गरप्रीन्ट नगरि किन फालियो? ८) निर्मलको सबलाइ उठाउदा किन शरीर तथा लुगा पखालेर किन पोस्टमार्टम गरे? ९) यश पि बिस्टका छोरा र मेहरका भतिज बर्थडे मनाउन गयका ओपेरा होटलमा गयको भए ओपेरा होटेल मात्र नभइ सम्पुर्ण बजारमा २० लाख खर्च गरेर लगाइएको सिसिटिभी क्यामराको फुटेज किन डिलेड गरियो?
यति धेरै प्रमाण हुदाहुदै पनि प्रमाण छैनन रे?थुक्क पुलिस प्रसासन ।
नायिका आँचलकि श्रीमान् उदिप र सिपोराको यस्तो प्रेमकथा: अमेरिकामा बसेको माया यसकारण टुट्यो (भिडियो हेर्नुस्)
One thought on “यति धेरै प्रमाण हुदाहुदै पनि प्रमाण छैनन रे? थुक्क पुलिस प्रसासन! भन्दै एक युवाले राखे यति धेरै जिज्ञासा!”
very very close to the reality .